साउनको महिमा र विज्ञान: कस्तो पहिरन, कस्तो खानपान ? – Enepali News
साउनको महिमा र विज्ञान: कस्तो पहिरन, कस्तो खानपान ?
July 16, 2020 181
उपवासको महिना, बोलबमको महिना, गेरु बस्त्रको महिना, भक्तिको महिना । अर्थात्, साउन । जसै साउन सुरु हुन्छ, फेसन बजारको रंग गेरुमय हुन्छ ।
खेतीबालीको कामलाई मैजारो गरिसकेपछिको फुर्सदिलो समय । न प्रचन्ड घममा रापिनुपर्ने, न त दर्के झरीमा भिज्नुपर्ने । न हिलो खेल्नुपर्ने, न धूलो झैल्नुपर्ने । यतिबेला नै हो, मनलाई धर्म, दर्शन, भक्तिमा लगाउनुपर्ने । किनभने भोग-विलासबाट मुक्त भएर आध्यत्मिक चिन्तन गर्ने बेला हो यो । सृष्टि र प्रकृतिको महत्वलाई बोध गर्ने बेला हो यो । साउनको महिनामा उपवास गर्नु, सात्विक भोजन गर्नु, मठमन्दिर धाउनु, गेरु बस्त्र पहिरिनुको विशिष्ट महत्व छ । सामाजिक, सांस्कृतिक र बैज्ञानिक सबै कोणबाट ।
खानपानमा होस् वा पहिरनमा, साउन महिनाले बेग्लै स्वाद र रंग पस्कन्छ । यतिबेला धेरैले माछा-मासु, मदिराजन्य खानपान गर्दैनन् । डिस्को धाउने, नाइटस्टे गर्ने क्रम पनि सुस्ताउँछ । भनौ, तामासिक जीवनशैलीबाट सात्विकमा रुपान्तरण हुन्छन् । मन्दिर धाउने, पूजाआजा गर्ने, गेरु बस्त्र धारण गर्ने, ‘ओम नमः शिवया’ जप्ने यहि महिनामा हो ।
साउनको फेसनः हरियो, रातो र पहेंलो
साउनमा लगाइने यस्तो रंग अर्थपूर्ण छ। हरियो रंगलाई प्रेम र वातावरणको, रातोलाई सौभाग्यको र पहेंलोलाई पवित्रताको प्रतिक मानिन्छ ।
साउनको खानपानः सात्विक एवं दुधजन्य
बोलबमले सात्विक जीवनशैलीतर्फ डोहोर्‍याउँछ । किनभने, बोलबम हिँड्नेले तामासिक जीवनशैली पूर्णत त्याग्नुपर्छ ।
खानपान र जीवनशैलीदेखि पहिरनसम्ममा सर्तक हुनुपर्छ । सादा एवं सुपाच्य खानेकुरा खानु वा उपवास बस्नुपर्ने चलन छ, बोलबममा । बोलबम हिँड्नुलाई काँवरीया भनिन्छ । उनीहरुले काँधमा बोक्ने बाँसको भाटालाई काँवर भनिन्छ, जसको दुई छेउमा घैला झुन्ड्याएर त्यसमा पानी भरेर नजिकको शिवालयमा पुर्‍याइन्छ । उक्त पानी शिवलिंगमा चढाइन्छ । त्यससँगै वेलपत्र, कुशको फूल, शमीको पात, नीलकमल तथा धतुराको फूलले पूजा गरिन्छ ।
बोलबम को सांकेतिक अर्थ हो, पानी र सृष्टिको महत्वलाई दर्शाउनु । चराचर जगत पानीमै आश्रति छ । पानीको अभावमा सृष्टि संभव छैन । शिवलिंगलाई सृष्टिको प्रतिक पनि मानिन्छ । के पनि भनिन्छ भने, अविरल पानीको स्रोत भएको स्थानबाट सुख्खा स्थानमा पानीले सिंचित गर्नुपर्ने प्रतिकात्मक सन्देश दिइएको हो यो ।
यसलाई यौनसँग पनि जोडेरव्याख्या गरिएको छ । यसबेला मानिसमा कामवासना बढ्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने संकेतको रुपमा पनि शिवलिंगमा पानी चढाइएको मानिन्छ । यो भनाईलाई साउनमा महिलाहरुले हातभरी लगाउने चुरा र मेहेन्दीसँग पनि जोडिन्छ । साउन महिनाभर चुरा लगाउनुको कारण पुरुष एवं पतिमा बढ्दो कामवासना नियन्त्रण गर्नु हो भन्ने गरिएको छ ।
Prevसाउन महिनाको यी ४ दिन नभुल्नुहोस् : यी दिनमा यस्ता कार्य गरे धन, सम्पन्नता खुशीको बहार छाउनेछ
Nextठोरी र माडीका जनप्रतिनिधि भन्छन्– अयोध्याबारे बोलेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद !
दाङका एक ७० वर्षीय दमका रोगीले जिते कोरोना
नेपालमै घ’ट्यो दु’खद घ’टना: क्वा’रेन्टाईनमा ब’सेकी महिलालाई सा’मुहिक ब’लात्कार
कोरोनाका कारण विदेशमा बसेका सबै नेपालीलाइ नेपाल फिर्ता पठाउन सकिने सम्भावना (2452)